Indlela ukuba unyothule Samsung Galaxy S3 Ngokulula | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Nangona le fowuni ye-Samsung evuyisayo sele ithengisiwe, sele iqengqeleka ixesha elithile ngoku, zizandla zabaphuhlisi abanjengo Umlilo we-Chain de xdadeveloperseyiphi ukwazile ukuguqula kernel, ukuyilayita nge-odin, kunye vumela ukufikelela kwengcambu kwisixhobo, ukongeza ekufumaneni iinkqubo zakho kwesi sixhobo kwaye ufakwe kwezinye iimodeli.
Kwisifundo esilandelayo ndiza kuchaza kubo bonke abanini bethamsanqa beli fowuni, indlela neengcambu Samsung Galaxy S3 kwimizuzwana embalwa. Oku kunokusinceda, umzekelo, ukusombulula ingxaki leyo Isamsung ihlala ilogo.
Into yokuqala kuya kufuneka siyenze iya kuba kukukhuphela iifayile eziyimfuneko kulo msebenzi, xa sele ukhutshelwe, ifayile ye sivula iziphu kwidesktop yeWindows, nangaphakathi kwifolda SGS3, Siza kufumana yonke into oyifunayo ukugqiba umsebenzi ngempumelelo.
Nathi kufuneka sibe nayo Abaqhubi be-Samsung bafakiwe ngokuchanekileyo kwifayile yethu PC, kuba oku kuyakufuneka ukuba siyifakile Kies kwaye ndidibanise Samsung Galaxy S3 ngonaphakade.
Ukufaka i-Kernel engakhuselekanga
I-kernel engakhuselekangawadalwa ngu Umlilo we-Chain, uya kusivumela kwaphula imbuyekezo yokuqala yeSamsung, ukuze ube nokufikelela kuzo zonke iifayile kunye neefolda zesiphelo, ukongeza ekusivumeleni ukuba sifake ifayile ye mncedisi.apkUkuba nako ukusebenzisa zonke ezo zicelo zifuna iimvume ezizodwa ze umnxibelelanisi.
Kuqala siza kucima ifayile ye- Samsung Galaxy S3 ukuyilayita imowudi yokukhuphela, siya kuyiphumeza le nto, siyiguqula ngokucinezela ivolumu phantsi kunye neqhosha lamandla, xa i-terminal ivuliwe, iya kusibuza ukuba sifuna ukufikelela kwi imowudi yokukhuphela, kuba oku kuyakufuneka ukuba sicinezele ivolumu phezulu.
Inyathelo elilandelayo iya kuba kukuqhuba odin3 v1.85:
Ngoku siza kucofa kwiqhosha PDA kwaye siya kukhetha kwifolda ICF-Insecure-SGS3_XX_NEE_ALE8-v1.2, ngaphakathi kwifayile nge ulwandiso lwetar enegama elifanayo nefolda.
Siza kuthatha unonophelo olukhethekileyo ukuba ukhetho Ukwahlula kwakhona yomfanekiso inombolo ye2 ayikhethwanga, ndiyaphinda, ukhetho Ukwahlula kwakhona akufuneki kukhethwe.
Siza kuyilayita ifowuni imowudi yokukhuphela endikhe ndakhankanya ngaphambili kwaye siya kuyidibanisa nentambo yakho ye-usb kwikhompyuter, ngokukhawuleza odin uyiqonde, liza kuboniswa igama COM kulandelwa inani ebhokisini inombolo ye3, ngoku kufuneka ucofe nje kwiqhosha Qala kwaye ulinde inkqubo igqibe, siya kuyazi kuba ebhokisini inombolo ye5 igama liza kuvela PASS.
Xa igama livela Kudlula inkqubo iya kugqitywa ngempumelelo, ngoku siza kulinda ukuba iqalise kwakhona, kwaye into yokuqala esiza kuyenza kukuya ku useto lwesixhobo kunye nokwenza ukususa iibhagi kwi-USB, ifunyenwe ngaphakathi kukhetho lwe phuhliso.
Emva koko siya kukopa mncedisi.apk esiya kuyifumana kwifolda i-sgs3-ingcambu-fakela, kwingcambu ye- sdcard del Samsung Galaxy S3, siya kuyidibanisa kwakhona kwikhompyuter, kwaye sisebenzise inkqubo Faka ibat ekwifolda efanayo.
xa inkqubo igqityiwe Samsung Galaxy S3, emva koko kuya kufuneka siphumelele mncedisi.apk ukuba sikope sdcard yesixhobo.
Ngale nto siza kuba nakho ukufikelela kweyona ndawo ifihlakeleyo yokufihla Isizukulwane samva sefowuni.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Khuphela i-S-Voice kwi-Samsung yakho nge-Android 4.0
Imvelaphi xdadevelopers, Umlilo we-Chain
Khuphela - SGS3
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Indlela ukuba unyothule Samsung Galaxy S3
Xa ndifuna ukuqhuba usetyenziso lwe-install.bat ndifumana le mpazamo ilandelayo:
I-adb ayamkelwa njengomyalelo wangaphakathi okanye wangaphandle, inkqubo, okanye ifayile ye-batch esebenzayo.
Kwenzeka into enye kum kwaye ayizukuvumela ukuba ube ngoyena mkhulu….
Phendula ku Errecarte_agus23
ngokufanayo kwaye iyavalwa ngaphantsi komzuzwana ngoko ndashicilela isikrini kwaye ndifunda impazamo efanayo
UEduardo Galaz Muñoz sitsho
iphi i-superuser.apk? Andazi ukuba i-keda inceda phi: S
Phendula uEduardo Galaz Muñoz
Phendula ku Avemay0
Molo ngokuhlwa .. yenza isifundo sakho kwaye khange ndibenangxaki ndide ndayiqala kwakhona ikhompyuter kwaye ndafaka i-superuser ... ndifumana impazamo akukho bhanari yeSU ifakiwe, kwaye iSuperSU ayinakuyifaka. Le yingxaki, ungandinceda? Ndingathanda ukubulela ngonaphakade
Ngomhla wama-222 sitsho
kukho umntu owaziyo ukusombulula le ngxaki? kwenzeka okufanayo nakum
Ndiyenzile kunjalo kwaye akukho nto yenzekileyo, ngoku kuqwalaselo> malunga nesixhobo> inqanaba> inqanaba lesixhobo; Ndihambile ndisiya esiqhelweni ndaya kuguqulwa, oku kukuvumela ukuba ulawule ukuba zeziphi iikhompyuter ezisisiseko kwaye ke iSamsung ayisebenzisi siqinisekiso, kwaye andifumananga ngcambu
Unesithuba sangoku sendlela yokwenza ngayo nge-odin.
Nge-12/08/2012 ngo-23: 10, «Disqus» wabhala:
Ukufezekisa, sele imile.
Inye kuphela into yokuba kufuneka ufake i-Samsung KIES ngaphambi kokuqalisa ukufaka.bat. Ukuba akunjalo, ayenzi i-SU kunye ne-superuser.apk ayinakufakwa.
Sele kubonisiwe kwisithuba sokuqala ukuba kuya kufuneka ufake ii-Samsung abaqhubi ngokufaka ngaphambili iiKies.
Ukuqala ifowuni kwimowudi yokukhuphela, ukongeza ekucofeni iqhosha levolumu kunye neqhosha lamandla, kufuneka ucofe iqhosha eliphambili ngaxeshanye. Bobathathu ngaxeshanye.
Kwelinye icala, ukuze ndikwazi ukwenza ufakelo lwamva nje lwee-Kies ezivela kwi-Samsung (ndizamile nenye yangaphambili, kodwa ayisebenzi) kwaye ukufaka.bat ukusebenza, kubalulekile ukuba ube neNkonzo kaMicrosoft. Ipakethi 3 ifakiwe, ukuba usebenzisa iWindows Xp.
Ndijonge nje. Nokuba inguhlobo lwamva nje lweeKIE ziyasebenza. I-install.bat ayisebenzi.
Ukujonga macala onke ndicinga ukuba kunyanzelekile ukuba ikhutshelwe isixhobo se-Android SDK ADB ukuze isebenze. Pof nceda, ungathetha nto ngayo? Enkosi.
Ngaba ubonile ukuba kukho iposti engaphezulu ukuyisusa kwaye ufake ukubuyisela kwinyathelo elinye?
Ndizamile le ndlela kwikhonkco elilandelayo. Kwaye isebenze ngokugqibeleleyo:
hey rhuma kwisiteshi sam se-youtube kwaye ubukele ividiyo yam https://www.youtube.com/watch?v=pg23AvsUHGk
Uxolo, ithathe ixesha elingakanani ukufumana igama elithi "PASS" kwibhokisi yesi-5, nceda, makhe sijonge ukuba umntu ebejingile na ndikhathazekile, kuthatha isiqingatha seyure. Imibuliso kubo bonke, enkosi kakhulu.
Ifowuni elungileyo kakhulu enemisebenzi enomdla kakhulu, kum
Ndiyithanda kakhulu kwaye mandithini malunga noyilo lwayo olukhulu
Mncinci kakhulu, kubuhlungu ukuba eVenezuela kubiza ingalo nomlenze,
kodwa ilungile kwabo banomdla wokwazi eyabo
Iimpawu ezinzulu ngakumbi apha ndishiya ikhonkco levidiyo
Oko kuchaza izibonelelo zale fowuni, ndiyathemba ukuba iyakuba yeyo
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungcambu njani, jonga ijelo lam le-YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pg23AvsUHGk
Bhalisela itshaneli yam nayo
UJam jam sitsho
I-PASS ivele kwaye ayiqalisi ngokutsha, kufuneka ndenze ntoni ????
Phendula kuJo Jam
Kwenzeka into efanayo kum kwaye ayikhanyisi, yenza izandi kodwa isikrini sihlala simnyama, ndingayisombulula njani? Ndishiyeke ndingenafowuni!
Ukuchazwa gwenxa, ayishiyi unxibelelwano lofakelo lwenkqubo okanye zifihliwe, kuya kufuneka ukhumbule ukuba abantu ababandakanyekayo abaziingcali ezifana nawe
Unayo amakhonkco kwisicatshulwa ngokwawo emva koko emva koko ukhuphelo
Nge-24/09/2012 ngo-16: 45, «Disqus» wabhala:
Ndenze onke amanyathelo kwaye ndasebenza ngokugqibeleleyo ... kodwa ke ndiye ndaqonda ukuba bekunjalo, kuba iselfowuni isebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle kwesitshixo (emva kwemizuzwana x) okanye xa ndinyanzela isitshixo ngeqhosha lasekunene ... ngalo mzuzu iselfowuni itshixiwe ngokupheleleyo kwaye ndinokuyivula kuphela ngokucinezela isitshixo amatyeli aliqela… Ngaba ikhe yenzeka into efanayo komnye umntu? Ukuba ukuphela kwesiphelo xa ucofa iqhosha lasekunene ??? Ndiyikhuphile i-SUPER SU kwityathanga lomlilo emva koko ifowuni iyasebenza kwakhona, kodwa kunjalo, ngaphandle kwengcambu kwakhona.
Nceda… ndincede… 🙁
Hayi adrian sitsho
ayisebenzi kwi-install.bat, ndenza ntoni ???
Phendula ku-Ayi Adrian
UAdrian barrera sitsho
i-instal.bat ayisebenzi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Phendula kuAdrian Barrera
Imstal .bat ayisebenzi kum kuba ndenze yonke into ebithethiwe yimiyalelo
i-install.bat ayisebenzi kum ndine-xp kunye ne-sp3
ayisebenzi ndipheka isamsung
Ndidinga uncedo, ngokungxamisekileyo! Ndenze inyathelo lokuqala, kwaye xa ukuqala kwakhona isikrini kuhlala kumnyama, uphawu lokuqala lwe-galaxy s3 gt-i9300 luyavela kwaye akukho nto, isandi sokuqalisa ngaphandle kwento ebonakalayo kwiscreen. izitshixo ezisebenzayo kunye neblue khokelwe, kodwa isikrini esimnyama… andiyiqondi! Ndibuyela njani? Kies andazi nam!
Ewe, ndakwazi ukuyilungisa phakathi. Ndifakile i-JB rom endiyifumene kumnatha, kwaye ekugqibeleni ndiqala, ubuncinci andinayo tel. ngoku ingxaki kukuba ii-kies: / ayiziqondi kwaye andinakukubuyisela ukusuka kugcino endilwenzileyo ngaphambi kokuqala yonke inkqubo. Indixelela ukuba esi sixhobo asixhaswanga. Ndingathanda ukubuyela kwi-rom esemthethweni, iVodafone JB. Nasiphi na isiphakamiso? Enkosi.
Nceda, umntu othile ukusombulule ukuqala kwakhona ngescreen esimnyama kunye neblue khokelwe.
Ndiyisombulule ngokuqala kwakhona kwimowudi yokukhuphela, ukunxibelelana ne-odin kunye nokufaka imbotyi esemthethweni yevodafone jelly, ukuze ndiphinde ndisebenzise ifowuni, kodwa andikwazi ukuyidibanisa neekies. Ndiceba ukubeka ii-ics kwakhona kwaye ndizihlaziye ngokusemthethweni. Esi sithuba kufuneka sihlaziywe okanye silumkise ukuba siphelelwe lixesha, ukufaka ukungakhuseleki kubangela iingxaki: /
ndiyenza njani lonto
Kwenzeka into efanayo nakum. Isikrini esimnyama kunye neblue ekhokelwe
Endaweni D Dlula KWAM UKUTHENGISWA KWENTENGISELO NDENZA NTONI?
UAugu Gomez sitsho
Iselfowuni yam ayivuli, emva kwegama elithi PASS, ayivuli, isikrini sihlala simnyama, nceda uncede
Phendula kuAugu Gomez
KWENZEKA okufanayo nakum…. NDIYILUNGISELELA NJANI ISelfowuni? !!!!
hey isifundo sakho siyasondela !!!
Ndinenye ye & t sgh-i747 zama ukuyincothula kwi & t kwaye uyijike ithi isamsung s3 kunye ne-ace isandi sombane kunye ne-pufff isikrini sihlala simnyama kwaye ukukhokelwa kuvula ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Yintoni endiyenzayo ukuyilungisa iyanceda ukuba bendikhe ndanayo usuku olunye kwaye ndiyisebenzise malunga nesiqingatha seyure: '(
Khanyisa i-firmware yoqobo usebenzisa i-Odin kwaye uyikhuphele kwi-sammobile
Ndaba yingcambu kwaye ngoku i-kies ayisamkeli isisele sam
Iiwayini kunye neeVintages uHlelo lweHlabathi, umncedisi wewayini kwi-Android